फेरि विद्यालय बन्द हुनसक्ने सूचना जारी - Rising Dainik
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on फेरि विद्यालय बन्द हुनसक्ने सूचना जारी
काठमाडौं: विद्यालयलगायत शैक्षिक संघसंस्थाहरु फेरि ब’न्द हुन सक्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय जाने उमेर समूहमा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण बढ्दो रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेसँगै बन्द हुने सम्भावना देखिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरी काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला सहरहरुमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि सं’क्रमण बढ्दो रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समय प्रयोगशालाहरुको परीक्षणबाट विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा सं’क्रमण बढेको तथ्यांक उल्लेख छ ।
किन ओली वि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सबैका हात काँपे ?
आफ्नै वकिलले डु’बाउने भए ओलीलाई, संसद ब्युँतिने सम्भावना ह्वात्तै बढ्यो !
February 5, 2021 February 5, 2021 Ramash Kunwar